Jidka saxda ah si Cab Water for dibada Riding
Celceliska cabirka biyaha caadiga ah ee ragga caadiga ah waa qiyaastii 60%, biyaha haweenku waa 50%, biyaha cabbirka ciyaartooyda heerka sare waxay kudhowyihiin 70% (maxaa yeelay muruqyada biyaha waxay gaarayaan 75% sidoo kale biyaha baruurta waa 10% kaliya). Biyaha waa qayb ugu muhiimsan ee dhiiga. Waxay u qaadi kartaa nafaqooyinka, oksijiinta, iyo hormoonnada unugyada waxayna ka qaadi kartaa wax soo saarka jirka. Sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah habka xakamaynta heerkulka jidhka bini'aadamka. Biyaha iyo elektroolka ayaa ka qaybqaata xakamaynta cadaadiska osmotic-ka bani'aadamka waxayna ilaaliyaan dheelitirka jirka aadanaha. Marka sida habboon ee biyo looga buuxin karo inta lagu jiro jimicsiga waa koorso khasab ku ah qof kasta oo fuushan.
Marka hore, ha sugin inaad biyo cabto ilaa aad harraadsan tahay. Aad ayey ugu adag tahay dadku inay qaataan biyo ku filan si ay u ilaaliyaan dheelitirka biyaha jirka inta lagu jiro jimicsiga. Luminta biyaha jirka bini'aadamka inta lagu jiro jimicsiga dheer waxay u horseedi doontaa cadaadiska sare ee plasma osmotic. Markaan harraad dareemo, jirkeena mar hore ayuu lumay sida ugu badan 1.5-2L oo biyo ah. Gaar ahaan raacitaanka jawiga qoyan iyo xagaaga, jidhku si dhakhso leh ayuu biyaha u lumiyaa, wuxuu dedejiyaa halista jirka ee fuuqbaxa, taas oo horseedi doonta hoos u dhac tartiib ah oo ku yimaada mugga dhiigga, dhididku hoos u dhacayo, iyo garaaca wadnaha oo dhakhso badan, taasoo horseedaysa muuqaalka hore ee daal. Waxa kale oo jiri kara angina pectoris oo nafta halis gelisa. Sidaa darteed, baaskiil wadista xagaaga si loo buuxiyo biyaha lama iska indho tiri karo. Miyaad ku dhiiran kartaa inaad iska indhatirto muhiimadda ay leedahay cabbitaanka biyaha xilligan?
Marka sida biyaha loo cabo ma saxbaa? Xitaa marka aadan bilaabin raacitaanka, waa inaad runti bilawdaa biyo cabid si aad jirkaaga ugu ilaaliso dheelitirka biyaha. Waxay qaadataa muddo kooban in biyaha la cabo inta lagu jiro baaskiil-ka si uu jidhkeenu u adeegsado, oo waqti aad u dheer oo biyo la cabo ah ayaa sababi kara in jidhka jidhkiisu hoos u dhaco, si aan si buuxda biyo loogu heli karin. Biyo cabidda kaliya haddii aad harraadsan tahay waxay jirkaaga uga tagi doontaa xaalad biyo yaraan fudud muddo dheer. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad dib u buuxiso biyaha 15-kii daqiiqaba mar markaad fuushaneyso xagaaga kulul. Hadday tahay tababar xoojin dhexdhexaad ah ama sare ah, waxaa lagugula talinayaa inaad dib u buuxiso biyaha 10kii daqiiqaba mar. Qadar yar iyo marar badan. Sidaa darteed, waa inaad keentaa la qaadan karodhalada isboortiga ama bacda biyaha markaad banaanka kore fuushan tahay. Shayga si fudud loo isticmaalo ayaa kuu oggolaanaya inaad dib u buuxiso biyaha wakhti kasta iyo meel kasta inta lagu jiro jimicsiga, mana kuu keenayo culeys adiga.